अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले लगाए कोरोना खोप : फाइजर र मोदेर्नालाई स्वीकृति
अमेरिकाका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् । सर्वसाधारणलाई खोप लगाउनका लागि उत्साहित गर्ने उद्देश्यले पेन्सले टेलिभिजनमा लाइभ गरेर खोप लगाएका हुन् ।
नागरिकहरुमा खोपको सुरक्षा र प्रभावकारितालाई लिएर विश्वास बढाउनका लागि त्यस्तो गरिएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । ह्वाइट हाउसमा भएको कार्यक्रममा पेन्सीकी श्रीमती तथा सर्जन जनरल जेरोमी एडम्सले पनि खोप लगाए ।
गएको सोमबारदेखि अमेरिकामा फाइजर–बायोएनटेकको खोप लगाउन सुरु गरिएको हो । अमेरिकामा स्वीकृति पाएको पहिलो सो खोपको प्रभावकारिता ९५ प्रतिशत छ । सबै ५० राज्यहरुमा पहिलो चरणमा ३० लाख खोपहरु वितरण गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका जो बाइडेन र उनकी श्रीमती डा. जिल बाइडेनले आउँदो सोमबार खोप लिने उनका प्रवक्ताले बताएका छन् । यसैबिच अमेरिकाले कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो खोप पनि आपतकालीन रुपमा सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
नियामक निकाय फूड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन (एफडिए) ले मोदेर्नाले विकास गरेको खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो । स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार बेलुका एफडिएले मोदेर्नाको खोपलाई स्वीकृति दिइएको घोषणा गरेको हो ।
यसअघि नै फाइनान्सियल टाइम्सले एफडिए खोपलाई स्वीकृति दिने निर्णयमा पुगेको खबर स्रोतलाई उद्धृत गरि खबर प्रकाशित गरेको थियो । एफडिएको सल्लाहकार बोर्डका विज्ञहरुले सर्वसम्मत रुपमा मोदेर्नाको खोप सुरक्षित तथा प्रभावकारी रहेको भन्दै स्वीकृति प्रदान गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि प्रक्रिया पूरा गरेर एफडिएले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण तीन लाख १० हजार भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ।
यौनका लागि शिक्षिकाले १५ वर्षका विद्यार्थीसमेत नछोड्दा जेलको बास
४४१ लाई आधार मानेर टाउको गन्दै आयोग
मन्त्रीको फिल्म हल जोगाउन जनताको घरमा डोजर : कार्यकर्ताले छाडीदिए पार्टी !
पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले आफै हटाए सर्वोच्चमा सुनुवाइको पेसी